Rwemichinjiko - China Nantong Wantong Steel Pipe
Famba kuburikidza pepuranga rwemichinjiko Style 2
Steel-epurasitiki ematongerwo mutopota
High maitikiro welded kwakakurudzira mativi simbi mutopota
High maitikiro welded kwakakurudzira kumativi simbi mutopota
MOQ: 10 matani
Supply kugona: 5000 matani pamwedzi
Payment mazwi: T / T, L / C pa kuona etc.
Joint Pin Caster Cross chibooreso
Steel mapuranga pamwe haka zvechizarira Pin chipeneti
Boka redu integrates rwemichinjiko chigadzirwa R & D, magadzirirwo, kugadzira, kugadzira uye basa rose, vonyanya rwemichinjiko pamusika kumba uye kunze, ichipa vatengi vane yakachengeteka uye zvemakwikwi rwemichinjiko zvigadzirwa.
Huru zvigadzirwa vari Disc scaffold hurongwa, Disc rutsigiro hurongwa, simbi nyere fastener rwemichinjiko hurongwa, musuo rwemichinjiko hurongwa, ndiro bhakoro rwemichinjiko hurongwa, nyeredzi dzinoti rwemichinjiko hurongwa, simbi springboard, simbi rutsigiro, sikuruwa nezvimwe zvigadzirwa.
1) The yakakwirira unodzivirira upfu zvemapuranga unyanzvi anogona kudzivirira rwemichinjiko kubva nengura uye ngura mukati vari mukati uye kunze pemvura chubhu, inoita upenyu hwayo sapanosvika kupfuura makore 3-5.
2) Poly dzichipfekeka rwemichinjiko anogona kushandiswa zvese mukati uye kunze kuvakwa kana equiped pamwe nenhumbi zvakasiyana. Sewevhu, caster vhiri, Jack nechigadziko, u musoro, uye etc.
A akaisawo rwemichinjiko zvinoda zvinotevera nenhumbi:
Steel Construction nepuranga Catwalk chitiviri:
1. rwemichinjikosimbi mapuranga: One
2.Main furemu: Two
5.Cross chibooreso: majoko maviri muchinjikwa kufamba ndakaisa simbi mumakumbo
1.Apply refu basa pakakwirira, akadai sokuvaka, horo, zambuko, viaduct, mugero, etc.
2. Bvunzai mukati nekunze rwemichinjiko fenzi.
3. Kushandisa nokuti chinjwa basa papuratifomu, zvakadai zvemagetsi michina, Hull kugadzirwa uye mamwe Decorating zvirongwa.
2.In mitundu vane simbi ubvise
Delivery nguva: Maererano uwandu uye Specification neimwe murayiro
Supply kugona: 5000 anogadza pamwedzi
Previous: Steel-epurasitiki ematongerwo mutopota
Next: Gate furemu rwemichinjiko
10 Feet rwemichinjiko
Aluminum Scaffold nepuranga
Drop Lock rwemichinjiko
Heavy Duty rwemichinjiko
Ring Lock rwemichinjiko Systems
Rwemichinjiko In Philippines
Steel rwemichinjiko Pipe Weights
Used rwemichinjiko For Sale
Heavy basa H furemu rwemichinjiko